मानव अनुहार भएको बिरालोको फोटो भाइरल ! | Suvadin !
मानव अनुहार भएको बिरालोको फोटो भाइरल !
अहिले सामाजिक सञ्जालमा मानव अनुहार भएको बिरालोको फोटो दिनका दिन भाइरल भइरहेको छ। तर, उक्त फाेटाे कहाँबाट अाएकाे भन्ने यकिन गर्न सकिएकाे छैन।
Nov 30, 2017 13:27
काठमाडौं, मंसिर १४ – अहिले सामाजिक सञ्जालमा मानव अनुहार भएको बिरालोको फोटो दिनका दिन भाइरल भइरहेको छ। तर, उक्त फाेटाे कहाँबाट अाएकाे भन्ने यकिन गर्न सकिएकाे छैन।
सामाजिक सञ्जाल अनुसार उक्त बिरालो मलेसियामा जन्मिएको बताइएकाे छ। जसको अनुहारको बनावट मानिसको जस्तै छ। फोटोमा बिरालोजस्तै देखिने यो जीवको टाउको र आँखा मानिसको जस्तै देखिएको छ। कपाल र छाला पनि मानिसको जस्तै देखिएको छ।
यस्तै पुलिसको अनुमान अनुसार यो फोटो अनलाइन बेच्न राखिएको सिलिकन बेबी वेयरवुल्फ हुनसक्छ। उक्त फोटोलाई पहिले इन्टरनेटबाटै डाउनलोड गरिएको र त्यसपछि भाइरल बनाएको पुलिसको दाबी छ।
यस्तै, स्थानीय पुलिसले यस्तो कुनै पनि अाराेप झुटो बताएको छ। आफूहरुलाई यस्तो कुनै पनि बिरालो जन्मिएको खबर नआएको पुलिसले बताएको छ। यद्यपि, सोसल मिडियामा भाइरल भइरहेको यो फोटोपछि एक पटक पुनः मानिसको जस्तै अनुहार भएको जनावरको जन्ममा चर्चा शुरू भएको छ।